Nhau - Ndeapi marudzi emhando dzehembe dzakasarudzika dziripo?
Ndeapi marudzi emhando dzehembe dzakasarudzika dziripo?
Mbatya dzekuzorora dzinogona kuve dzakakamurwa kuva avant-garde kutandara, kutandara kwemitambo, kudakadza kudanana, bhizinesi zororo uye yekuzorora yekumaruwa.
1.Avant garde zvekupfeka:
Avant-garde yakasununguka kupfeka, inozivikanwawo seyefashoni yakasununguka kupfeka, ndiyo inonyanya kufarirwa zvipfeko zvakagadzirwa zvakagadzirwa, izvo zvinoratidza zvizere dhizaini dhizaini, dhizaini yekugadzira uye inotungamira mafashoni mafambiro. Munguva yemafashoni ekuzorora, vagadziri vefashoni mumakona makuru epasirese vanoburitsa zvinonzi zvipfeko zvepamusoro-soro uye zvemberi-zvakagadzirwa mbatya kupasi kaviri pagore, mazhinji acho ari evant-garde masitayera ekupfeka. Chinhu chakajairika cheavant-garde chekupfeka chekupfeka ndechekuti huwandu hukuru hwemachira matsva kana matsva anoshandiswa, chimiro chakasiyana, chimiro chiri avant-garde, uye ruvara uye pateni zvakasarudzika. Kuti tisangane nekuravira kwevanhu vatsva vefashoni uye titungamire iyo yekucheka-mafashoni fashoni, isu tinoedza zvatinogona kuratidza kusarudzika kweiyo mhando dhizaini uye dhizaini yekugadzira. Mumusika, dhorobha dhizaini yekuzorora inopfeka nemapoka akasiyana ekushandisa mafashoni uye kutaridzika kwekushongedza zvakare ndeya rudzi urwu rwezvipfeko, asi kuchinjika kwayo kwakanyanya, uye chimiro hachizove chakasiyana zvakanyanya.
Zvipfeko zvemitambo hazvireve kuti mbatya dzemakwikwi dzinopfekwa nevatambi vehunyanzvi, asi mhando yemitambo ine mitambo. Mitambo yakasununguka kupfeka yakagadzirirwa kusangana nemamwe emitambo mashandiro, ayo anogona kuratidza kunzwa uye akasimba maitiro emitambo mumitambo yekuzorora. Chimiro chechipfeko chemitambo chinowanzo kuve padhuze nenzira yemitambo, ine kuomesa kuomarara, kupenya kwemavara, nyore kutambanudza uye kuita kwakanaka. Chimiro chayo, mashandiro uye simba rakagara rakafarirwa neveruzhinji, kunyanya vechidiki. Kubva pane yakakurumbira pfungwa yekushongedza, mbatya dzemitambo dzinotarisa pahunhu hwezvinhu zvekumusoro, kutema tekinoroji uye kubudirira kana kukundikana kwema brand oparesheni modhi kuti uone kukosha kwemusika wezvigadzirwa.
Kudanana kwevasina kupfeka rudzi rwemhando yezvipfeko zvisina kujairika zvine rudo rwepfungwa. Izvo zvinonzi zvipfeko zvemusikana, zvevakadzi uye zvimwe zvekupfeka zvemumba zvakajairika zvikamu mumusika. Hunhu hwakajairika hwekupfeka zvisina kujairika kupfeka mitsara yakapfava uye yakapfava, mavara akapfuma, akapamhama uye akakura modelling mufananidzo, yakapfava uye inotapira kirimu dhizaini, nyoro uye inofadza mapatani ekatuni, uye nhamba hombe yezvinhu zvekushongedza senge tambo, uta, wave durian, nezvakarukwa uye zvimwe zvekushongedza zvinhu zvinowanzoshandiswa kushandiswa kugadzira yakasarudzika chaiyo mamiriro ekudanana uye yekuzorora maitiro.
4. Bhizinesi kupfeka zvakapfekwa:
bhizinesi rekupfeka, rinozivikanwawo sehunyanzvi hwekupfeka zvekupfeka, izwi rinoratidzika serinopesana, asi kubva pamamiriro azvino ezvipfeko zvevanhu vemazuvano, kunyangwe mune akaomarara uye epamutemo zviitiko zvebhizinesi, kusangana kwemafaro emafaro hakudzivisike. Naizvozvo, bhizinesi rekupfeka rakasarudzika rinogona kuoneka sekusiyana kwembatya dzebhizinesi, inova iyo yakasanganiswa yemakemikari yemhando yepamusoro yezvipfeko uye anozivikanwa ezororo. Dhizaini yerudzi urwu rwezvipfeko inonyatso chengetedza iyo modelling dhizaini uye yakakosha dhizaini yeakarongeka mapfekero. Inotarisa pane zvakaumbwa, chinhu chemukati, ruvara, machira, uye matekinoroji maitiro ekugadzirisa zvimwe, kuitira kuti inyatsobatanidza zvinhu zvakakurumbira zvemhando yekuzorora mubhizimusi rebhizinesi, kuti uwane yakasimba asi isina kuomarara, orthodox uye zvisingaenzaniswi mhedzisiro, kuitira kusimudzira hukama mune basa.
5.Nyika yakasununguka kupfeka:
Nyika masitayoni akapfeka zvekupfeka ndiyo yekurebesa yekuzorora kupfeka munhoroondo. Muchokwadi, mbatya dzakapfekwa nevarume venyika muzana ramakore re19th dzaive mhando dzekupfeka kwazvino kwekuzorora, kunyanya mumunda wekupfeka kwevanhurume. Izvo zvakapusa zvinhu, zvakajairika uye zvakasununguka modelling uye yemahara maitiro eakakora ore ave iwo manzwiro echokwadi evanhu vanodzokera kune zvakasikwa uye vachikurudzira zvisikwa. Kumaruwa kupfeka kwakasarudzika rudzi rwembatya dzekuzorora dzinopfekwa nevanhu vemadhorobha vemazuva ano vane mafungiro ekumaruwa, ayo anoratidza kusangana kwevanhu vemazuvano. Zvichifambiswa nenharaunda, nguva uye manzwiro ehukama, zvipfeko zvekuzorora zvekumaruwa zvakavezwa nenzira dzakasiyana mumusika, senge "yenyika masitayiti yekuzorora kupfeka", "fashoni yemafaro yekuzorora", "kushanya uye zororo kunze kwekuzorora kupfeka".
Isu tinoshandira makirabhu emitambo, masangano, makoreji, zvitoro, nzvimbo dzekutenga, sangano rehurumende, mubatanidzwa uye vanhu vamwe nevamwe.
Kutora maOEM & ODM maodha kubva kumarudzi ese emhando. Isu hatisi kungopa chete dhizaini & yekugadzira sevhisi asi zvakare bhizinesi kubvunza basa.